प्रत्येक सम्बन्धको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न: "तपाइँको क्रेडिट स्कोर के हो?"
तपाईंको अर्को महान सम्बन्ध फेला पार्नदेखि विशेष रातको लागि भुक्तान गर्न, राम्रो क्रेडिट हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
यो ब्लग थियो मूल रूपमा प्रकाशित CFED को "समावेशी अर्थव्यवस्था" को भागको रूपमा ब्लगमा सम्पत्ति र अवसर राष्ट्रिय कार्यको.
हामी सबै अधिसूचना पाउँदा उत्साहित छौं कि तपाईको डेटि profile प्रोफाइल हेरे पछि कोहीले तपाईलाई चासो देखाएको छ। तपाईं द्रुत रूपमा तिनीहरूको जाँच गर्नुहोस्, उनीहरू कहाँ बस्छन्, उनीहरूका रूचिहरू छन्, उनीहरूका चित्रहरूले उनीहरूको बारेमा के भन्छ हेर्नुहोस्।
तर के यदि तपाईं तिनीहरूको क्रेडिट स्कोर पनि देख्न सक्नुहुनेछ?
यति धेरै सम्बन्धहरू पैसाको समस्याहरूले भरिएका हुन्छन्, त्यसैले यो जान्न बुझ्न सकिन्छ कि तपाईंको सम्भावित पार्टनर आर्थिक रूपमा राम्रो छ कि छैन भनेर। डेटि sites साइटहरू स्व-रिपोर्ट गरिएको उपायहरूमा आधारित अनुकूलताको निर्धारणमा राम्रो छन्, तर क्रेडिट स्कोर जस्तो लाग्न सक्ने उद्देश्य सूचक प्रयोग गर्दा यसले राम्रो मिलान गर्न मद्दत गर्दछ जस्तो देखिन्छ - र सम्भावित रूपमा प्रेम चराहरूलाई सडकमा केही गम्भीर आर्थिक समस्याहरूबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
मान्छेहरूसँग के हुन्छ जोसँग कुनै क्रेडिट इतिहास छैन?
त्यहाँ एक अनुमान छ संयुक्त राज्य अमेरिकामा २ million करोड मानिसहरु जो "क्रेडिट अदृश्य" छन्यसको मतलब, reportणीकर्ताको प्रोफाइलमा क्रेडिट रिपोर्ट वा क्रेडिट स्कोर उत्पन्न गर्न पर्याप्त जानकारी छैन। कालो र हिस्पैनिकहरू गोरा वा एशियाई अमेरिकीहरू भन्दा अदृश्य क्रेडिट हुन वा असुरक्षित क्रेडिट रेकर्डहरू भन्दा बढी सम्भावना हुन्छ। लाखौं थपसँग "सबप्राइम" क्रेडिट छ, जसको अर्थ उनीहरूसँग कम-आदर्श क्रेडिट प्रोफाइलहरू वा स्कोरहरू छन्।
त्यहाँ एक महिला थिइन् जुन एक शुक्रबार दिउँसोमा गिराइन् Mission Asset Fund (MAF), गैर-नाफामुखी जहाँ म काम गर्छु। उनले सोधिन् कि उनी पैसा पाउन सक्छिन् कि भनेर कि उनी आफ्नो छोरालाई उनीको जन्मदिनको रातको खानामा लैजान सक्छिन्। दुर्भाग्यवश, एमएएफको सामाजिक loanण कार्यक्रमले उनीहरुलाई आवश्यक कोषको सानोपन प्रदान गर्दैन।
त्यसोभए उनी जस्तो कोही कहाँ जान्छ?
यदि उनीसँग क्रेडिट छैन र साथीहरू र परिवारबाट orrowण लिन असमर्थ छ भने, उनको एक मात्र विकल्प एक payday nderणदाता मा जान सक्छ कि त्यो दिनको एक पैसा एक रोजगारदाता संग उनको नियमित आय मा एक अग्रिम को रूप मा प्रस्ताव गर्न सक्छ। जे भए पनि payday ndणदाताहरु ब्याज दर र शुल्क चार्ज गर्न को लागी चिनिन्छ, व्यापार मा उनको परिवार लाई एक उत्सवको खाना खान को लागी लायक लाग्न सक्छ।
मैले धेरैजनालाई payday shopण पसलमा यही निर्णय गर्ने देखेको थिए जुन मेरी आमाले इण्डियानामा व्यवस्थापन गरिन्। चुनौती यो थियो कि एक पटक कसैले एक payday tookण लिए, यो धेरै गाह्रो भयो यसबाट छुटकारा पाउनको लागि।
एक छोटो अवधि का likeण एक लामो अवधि के प्रतिबद्धता मा balloone जस्तो देखिन्थ्यो।
हाई स्कूलमा छँदा, म क्यालिफोर्नियाबाट हरेक छ महिनामा मेरी आमालाई भेट्न फर्कें, र हरेक वर्ष उही ग्राहकहरूलाई फेरि भेट्ने थिएँ। उनीहरूले क्रिसमसको लागि मेरी आमालाई पनि उपहार दिन्थे। Payday nderणदाता चाँडै नै छनौटको becameणदाता भयो र कहिलेकाँही एक मात्र nderणदाता, यस्तो ठाउँमा जहाँ ग्राहकहरूले सुनेका र बुझ्ने महसुस गर्थे, तर जसले तिनीहरूलाई क्रेडिट र debtण चक्रबाट बाहिर तोड्यो ताकि तिनीहरूले वास्तवमै सम्पत्तिहरू निर्माण गर्न सकून्।
धेरै राज्य कानूनहरूले उपभोक्तालाई सिकारी ndणदाताको बिरूद्ध संरक्षण गर्दछ, तर bण लिनेहरूले अझै पनि यी loansणहरू अनलाइन पहुँच गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरू उनीहरूको छिमेकमा उपलब्ध छैनन्। न्यू योर्कले यसको बारेमा अनलाइन ndणदाताहरूलाई चेतावनी दिएको छ ब्याज दर क्याप्स र शीर्षक ndingणको बिरूद्ध नियमहरू, जब कि क्यालिफोर्निया जस्ता अन्य राज्यहरूले पनि हेरेका छन् अपरेसनहरू राज्यबाट बाहिर आदिवासी आरक्षणमा सर्छन् नियमहरू असफल पार्न र व्यवसाय जारी राख्न। कानूनहरू उपभोक्ताहरूलाई खराब loansणमा पहुँच गर्नबाट जोगाउनका लागि पर्याप्त छैन, किनकि मानिसहरूलाई जहिले पनि पूँजीमा पहुँच गर्न आवश्यक पर्दछ।
कडा उपभोक्ता संरक्षणमा अवरोधहरू मध्ये एउटा हाम्रो देशले क्रेडिट बारे जान्छ।
यो सहज छैन कि कुनै व्यक्ति बिजुली वा केबल बिल तिर्न असफल भएको कारण तिनीहरूको क्रेडिट रिपोर्टमा डिन हुन सक्छ, जबकि एकै साथ यस्तो सेवाहरूको लागि नियमित समयमा अनलाइन भुक्तानी गर्दा फाइदा लिन असमर्थ छ - यद्यपि तिनीहरूलाई प्राय: आवश्यकता पर्दछ। क्रेडिट जाँच वा एक ठूलो निक्षेप। बढ्दो रूपले, क्रेडिट यति महत्त्वपूर्ण भएको छ कि यसले तपाइँ कहाँ काम गर्छ र जहाँ तपाइँ बस्नुहुन्छ जहाँ पनि असर गर्न सक्छ।
तपाईंको अर्को महान सम्बन्ध फेला पार्नदेखि विशेष रातको लागि भुक्तान गर्न, राम्रो क्रेडिट हुनु महत्त्वपूर्ण छ। मेरो आप्रवासी बुबा जो भारत बाट संयुक्त राज्य अमेरिका आएका थिए उसले मलाई बारम्बार भन्यो कि युवा वयस्कको रूपमा क्रेडिट कार्डहरू लिनबाट जोगिनुहोस्, ताकि म उनीहरूले गरेका गल्तीहरूदेखि टाढा रहें। उसले मलाई उसको एएमएक्स चार्ज कार्डमा एक अधिकृत प्रयोगकर्ताको रूपमा थप्यो त्यसैले म historyण लिने बिना नै क्रेडिट ईतिहास बनाउन सक्दछु।
म तपाईंलाई क्रेडिट को बारेमा तपाईंको परिवारका सदस्यहरू र साथीहरूसँग समान कुराकानी सुरू गर्न प्रोत्साहित गर्दछु।
तपाईं A&O नेटवर्क मा एक संगठन संग कनेक्ट गर्न चाहानुहुन्छ तपाईलाई ठूला वित्तीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्न। तपाईं, तपाईंको सम्बन्ध र तपाईंको क्रेडिट प्रोफाइल शक्तिशाली हुन योग्य हुनुहुन्छ।